विद्यालय पनि सातामा दुई दिन बन्द हुने
१. विद्यालयहरुले साविक बमोजिम नै विहान १० बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म विद्यालयमा पठनपाठन सञ्चालन गर्ने ।
२. शुक्रबार दिनको १ बजेसम्म पठनपाठन सञ्चालन हुँदै आएकोमा सो दिन पनि अन्य दिनहरुमा जस्तै अपरान्ह ४ बजेसम्म पठनपाठन सञ्चालन गर्ने गराउने ।
पाँच वर्षमा अमेरिकाका सयभन्दा बढी विद्यालयमा गोलीकाण्ड
काठमाडौँ । अमेरिकाको टेक्सासमा भएको गोलीकाण्डमा २१ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा १९ निर्दोष बालबालिका रहेका छन् । अमेरिकामा विद्यालयहरूलाई लक्षित गरिएको यो पहिलो पटक होइन । अमेरिकामा
काठमाडौँ । अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा एक युवकले प्राथमिक विद्यालयमा गोली चल्दा कम्तिमा १९ जनाको मृत्यु भएको छ । यस गोलीबारीमा हालसम्म १८ बालबालिका र एक जना वयस्कको मृत्यु भएको सिएनएनले जनाएको
ख्वपलाई विश्वविद्यालयको अनुमति नदिए थप नयाँ कलेज चलाउँछौं- मेयर सुनिल प्रजापति
भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर सुनिल प्रजापतिले ख्व्प विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति नपाए नगरपालिकाले थप नयाँ कलेज सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताएका छन् । सेवा निवृत्त शिक्षक समाज भक्तपुरले
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हप्ताको छ दिन नै नियमित पठनपाठन र अन्य सेवाहरु सञ्चालन गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारले परीक्षणका रुपमा जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी हप्तामा दुई दिन